Ganacsiga tafaariiqda iyo shaqo iibka fiican | khayraadka Work ka USAHello | USAHello
Ganacsiga tafaariiqda iyo shaqo iibka fiican
Baro warshadaha iibka iyo noocyada kala duwan ee iibka iyo shaqooyin tafaariiqda. Read ku saabsan shaqooyinka iibka fiican iyo waddooyinkiisa mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto in iibka. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
Sales wax walba celceliska ka dukaan iibinta alaabta in ay wakiil ah shirkad. warshadaha iibka ayaa sidoo kale waxay bixisaa aad fursad u helaan inay shaqada guriga. Sales daboolaa la warshado kale oo badan oo ka fashion daryeelka caafimaadka. Shaqooyinka Sales noqon kartaa shaqo ku meel gaar ah, laakiin qaar ka mid ah shaqooyinka ugu fiican iibka noqon kartaa xirfado nolosha oo dhan.
Sales ka mid ah tafaariiqda, taas oo macnaheedu yahay in dadka iibinta wax si toos ah. Malaayiin qof ayaa ka shaqeeya iibka tafaariiqda. Waxaa had iyo jeer waa baahida sare oo wax iibiya tafaariiqda, laakiin shaqooyin aan la had iyo jeer si fiican u bixisay. Read macluumaadka dawladda iyo tirakoobka ku saabsan shaqooyinka iibka.
Sales ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah iibka ka gaare ah waxyaalaha iibiyaha ah, sida dukaan. Waxa kale oo ay noqon kartaa user weyn, sida isbitaalka. Waxa kale oo ka mid ah adeegyada lagu iibiyo iyo alaabooyinka sida advertising iyo caymiska.
Waa kuwee iibka ama shaqo tafaariiqda?
warshadaha iibka waxay bixisaa xirfado badan oo kala duwan. Halkan waa wax yar oo ka mid ah:
ku xigeenka iibka - ka shaqeeya dukaan waa wanaagsan waqti-gaaban ama shaqo ku meel gaar ah wax yar ama waayo-aragnimo ma u baahan yahay. Waxaa jira had iyo jeer boos u furan.
Lacaghayaha - shaqo u fiican qof aan xusuusanayn hawlaha soo noqnoqda a. Waxaad u baahan tahay waqti dheer taagan oo sii aragti saaxiibtinimo macaamiisha.
Telesales - iibka telefoonka ku siinayaa dabacsanaan si ay u shaqo guriga, laakiin waxa ay noqon kartaa mid adag si ay u helaan mushahar fiican.
wakiilka iibka Medical - daawo iibinta iyo qalab caafimaad waa shaqo si fiican u bixisay laakiin tartan. beerta Tani waxay u baahan waayo aragnimo iyo aqoonta caafimaadka.
wakiilka iibka Tech – Microsoft, IBM, Adobe iyo Salesforce ka mid ah shirkado badan oo casriga ah in ay bixiyaan shaqooyin mushaar sare iibka inay wax iibiya xirfad yihiin.
Maareeyaha iibka - Tababaraha iibka waa hogaamiyaha koox ka dhiga qorshayaasha iyo maamushaa wax iibiya.
iibka Caymiska - A iibiyaha caymiska wanaagsan la taliyaa dadka intii iibiyo iyaga. iibka caymiska u baahan yihiin tababar iyo liisan gobolka.
estate Real - fursadaha dalabyo hantida iibinta in la sameeyo lacag aad u badan, laakiin waa beer tartan. dilaaliinta hantida maguurtada ah iyo wax iibiya u baahan tahay laysanka gobolka iyo wax badan oo ka mid ah aqoon ku saabsan sharciga.
iibka Online - iibinta alaabta online waa field wanaagsan ee qof kasta oo raba in u tagaan ganacsiga naftooda.
iibka advertising - advertising iibinta ganacsatada iyo shakhsiyaadka waa shaqo badanaa la sameeyaa by phone. advertising badan waxaa loo sameeyaa online iyo waxay u baahan tahay aqoon takhasus ah matoorada search iyo e-commerce.
Ma shaqo iibka shaqo sax ah ii?
Ma aha qof kasta wuxuu leeyahay shaqsiyad ee iibka! Shaqooyinka Sales joog dadka xilka, edeb, iyo sasabasho. hab Qancin in aad ku fiican tahay ka dhaadhicinta dadka. Dhageysiga waxa ay macaamiishu odhan sidoo kale kaa dhigi doonaa iibiyaha wanaagsan, sida aad ku ogaan doonaa waxa ay doonayaan.
Shaqooyinka Sales ee iibka tafaariiqda ama phone waa shaqo wanaagsan oo loogu talagalay dadka si ay shuqulka waxyaalaha kale ee nolosha a. iibka Phone ogolaan in aad ka shaqayso guriga, iyo shaqooyinka tafaariiqda ogolaan in aad ka shaqayso gelinba. dheeraad ah oo leh Baro profile tafaariiqda mustaqbalkiisa iibiyaha ka Career Onestop.
Xaggee ayaan bilaabi?
Waxaad shaqo tafaariiqda shaqo ama phone iibka heli kartaa lahayn waayo-aragnimo hore, laakiin waxaad u baahan doontaa xirfadaha wanaagsan luqadda Ingiriisiga ee shaqo fiican iibka. Waayo, kuwo badan oo shaqooyinkan, shaqo-aad tababari doonaa in ay isticmaalaan hababka ay.
Xirfadaha iyo tababarka
Qaar ka mid ah shaqooyinka iibka u baahan doonaa xirfado iyo waayo-aragnimo hore. maamulayaasha Sales iyo wakiilada iibka inta badan shahaadooyinka jaamacadeed. Tani waxay noqon kartaa shahaado ganacsi ama shahaado ee Iibka iyo suuq-.
Jid kale oo maamulka iibka ayaa ka shaqaynaysa, jidka aad ku kor. Waxaa laga yaabaa inaad bilowdo kaaliye iibka ama iibka phone, laakiin waxa aad codsan kartaa shaqo heer sare-gudahood shirkadda marka aad leedahay waayo-aragnimo qaar ka mid ah oo ay muujiyeen xirfadaha iibka.
Haddii aadan hubin waxa iibka mustaqbalkiisa aad rabto in aad isku daydo, fikirto oo beerihii iibka ay u badan tahay in ay ballaariso in mustaqbalka. Waxaad go'aansan kartaa in ay tababarto mid ka mid ah shaqooyinka kuwa.
Raadi fasalka kuu dhow
kulliyado badan ayaa iibka iyo suuq-fasalo. Waxaa laga yaabaa in fasalada gaar ahaan loogu talagalay dadka cusub oo af Ingiriisiga baraneysa. Raadi college beesha kuu dhow.
Maxaa kale oo aan u baahan?
Ma u baahan tahay si ay u bartaan Ingiriisi?
ma waxaa rabtaa muwaadin noqoto?
ma waxaa rabtaa kasban aad shahaadada GED®?
Isticmaal xarunta shaqooyinka deegaanka: xarumaha shaqada Dawladda ee magaalo kasta waa lacag la'aan. Waxay bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Waxay kugu xidhi karaan tababarka iyo waxbarashada shaqada. Raadi kuugu dhow xarunta shaqada.
Raadi online: Salesjobs.com waa website a shaqo ku takhasusay oo dhan cayn kasta oo shaqo iibka.
khayraadka More ka USAHello
Monica Phromsavanh: ka qaxooti in ganacsadaha guul